N’ime afọ iri na ọkara ahụ, agbalịrị m ọtụtụ ndị agha dị iche iche. Ana m eji ndị ọrụ atọ dị iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ m dị iche iche, nihih ụdị dị ich iche na ndị dị otú ahụ, ma Onye Ọchịchị Obodo Ukwu aghọwo m ngwa ngwa mas na naụ אדיבה ọtụtụ n’ime saịtị m na. E hiwere ha na 2001, you just ha anọwo na gburugburu 10 afọ.
2 אהמ na מַ ְ נ ַ ְ ַ ַ ַ ַַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ụ ụ ụ ụ
3 Ụdị בוכום
7 אגו kachasị ịhụrụ
Ọ bụrụ na ị nọ na-emepụta ihe ịntanetị ogologo oge karịa sekọnd atọ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe nsogbu na onye ọbịa ma ọ bụ abụọ. E nwere ihe ole na ole dị njọ karịa ịnweta saịtị gị na netwọk ọhụrụ ahụ, na-eche na ọ dị mma ma na-agba ọsọ na nsogbu ndị a na-apụghị idozi.
Ndị na-agba ọsọ na-abanye na saịtị gị אתר na backend
אתר Nume של Nzaghachi n’aka ndị ahịa
Bagba ụgwọ ụgwọ ụgwọ
Nkwado teknụzụ אתר n’aka onye nọ na mba ọzọ ma ị pụghị ịghọta ihe ọ na-ekwu n’ihi ụda olu
N’ime nsogbu ndị a nile, aghaghị m ịsị na ngwa ngwa ma ọ bụ dara ogbenye ahịa bụ kacha njọ. Enwere m ike ịzụta ihe efu ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụrụ na m nwere ike ịrụ ọrụ na ya. Enwere m ike ịnagide mmezigharị ụgwọ ụgwọ mgbe ụfọdụ. Ụrụ ahịa ndị na-adịghị mma bụ otu n’ime ihe ndị siri ike ịmekọrịta, nihi na ọ na-eme ka ọ ghara ikwe omume idozi nsogbu ọ bụla i nwere. Ihe ọzọ nke na-akpata ọtụtụ nsogbu bụ oge na-adịghị ngwa ma ọ bụ ala oge. Ndị ọbịa gị ga-enwe nkụda mmụọ maka ihe ndị a, ị ga-enwekwa אגו.
N’oge gara aga, enwere m ụfọdụ akụkọ ọjọọ banyere saịtị na-agbada ma na-ewughachi (nke ga-akụziri gị ngwa ngwa iji na-edebe saịtị gị mgbe niile). N’elu nke ahụ, enwere m ndị ụsụụ ndị na-anwale ịkwụ ụgwọ site n’ịgba ụgwọ n’oge na-adịghị anya, na-agbanwe agbanwe ụgwọ oge, na-akwụ ụgwọ okpukpuụụọụọụọụọ i i . Mgbe ah e, ​​e nwere oge mgbe saịtị m nile gbadara n’enweghị ihe kpatara ya ma onye na-elekọta ya gbalịrị ịgwa m na ọ ghaghị ịbụ na m ga-agwụ. Iche, ebe ọ bụ otu ihe ahụ na kọmpụta ọ bụla m gbalịrị na ndị niile m gwara ka m gbalịa ịnweta saịtị m na njedebe ha. Ị היו ike היו ya na m dị ntakịrị ihe ụlọ ọrụ weebụ nakwa na ikwesị ntụkwasị obi na ọrụ ndị ahịa bụ abụọ n’ime àgwà ndị kacha emetụta m.
אהמ na מַ ְ נ ַ ְ ַ ַ ַ ַַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ַ ụ ụ ụ ụ
M gbanwere na Onye Ọchịchị Ebe Ọchịchị maka ọtụtụ n’ime akụkọ m na ספטמבר nke 2007.
Ugbu a, mụ na ha nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise, nke kachasị dịrị m ka mụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ahụrụ m ihe dị iche na ọrụ ndị ahịa. Enweghị m ịjụ ma ọ bụrụ na ha na-enyefe ebe nrụọrụ weebụ m dị ka nzaghachi, ha nyere.
Oge ole na ole enwere m nsogbu, ha azaghachiri ozi-e n’ime nkeji, ọ bụghị ụbọchị maọbụ wacht. N’otu oge, ọ na-ewe ha ụbọchị ole na ole ka ha Chọpụta ihe gbasara azụ, ma ha nọgidere na kọntaktị ma debe m na ọganihu. Ekwesịrị m ịsị na ndị ọrụ aka na-akwado ndị mmadụ na Ogbe Ndịda na-enwe nghọta na obi ụtọ.
Mgbe ndị omempụ wakpoo saịtị m, ha nyeere m aka ịmata otú m ga esi esi nwetaghachi ya ebe ọ bụ ma nye m ozi iji chebe ya. Ihe ndị a bụ nsogbu ha na-enweghị iji nyere m aka, ebe ọ bụ na hack enweghị njikọ na ndị ọrụ ha, ma ha wepụtara ande iji nyere m aka n’ihi na ha nwere ihe ọmụma ma nwee ike.
נזי. Ihe kpatara ọdịiche dị na Ogbe Ndịda Ọchịchị bụ na ha na-azaghachi okwu ndị ahụ ngwa ngwa, ọ Kachamara na afọ ojuju m. Nke ahụ bhe ihe na-egbochi m ịbanye na sava ha ruo ọtụtụ afọ na njedebe.
Onye na-elekọta ndị ọbịa na-enye mkpokọta Bochum, nchịkọta nke Bochum na ndị nchịkwa משווק. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ndị ọzọ raara onwe ha nye, ha nwere ọtụtụ nhọrọ, dịka ndị sava raara onwe ha, raara onwe ha nye, ma ọ bụ sava nzuzo onwe.
Ọ bụ ezie na ọnụahịa nwere ike ịdị iche, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nchịkọta isi maka otu saịtị, ị nwere ike ịnweta maa bha ma kwụọ ụgwọ n’ọdịnihu. Ị נווקווארה אייק ị קווụ ụ גווọ קווה ọ נווה מא ọ בụרụ נא ị צ’ọọ ọọ ממבני אגו dị otú ahụ ogologo oge.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọtụtụ ngalaba, ị ga-achọkwu ohere. Akwụkwọ ha "זהב משותף" na-enye 20 GB nke ohere diski na ikike ị gbakwunye na ngalaba na-akparaghị ókè maka gburugburu 25.95 $ קנוה. Ị ga-echekwa ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka ọtụtụ ọnwa ruo afọ atọ n’ọdịnihu.
Njirimara nke Onye Ogbe Ndịda na-enye dị mma maka ọtụtụ weebụsaịtị. השאירו את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה, הם לא צריכים. Panyere a na-enye gị ohere ịnweta ihe niile sava ha ga-enye. Fant na-agụnye Fantastico, nke na-enye gị ohere iji wụnye WordPress, PHPList to ọtụtụ ihe omume mmeghe ọzọ. Nke a ga-etinye usoro ihe omume ahụ ma mepụta data nchekwa SQL gị na-akpaghị aka, na-eme ka ọ bụrụ onye zuru oke maka onye nwe ụlọ ọrụ na-abụghị ọrụ. Ike gụnyere:
סיומות לדף הקדמי
הזרמת מדיה Na-akwado
Nkọwa maka nkesa na-adịgasị iche, mana ịkekọrịta ngwugwu ọtụtụ ndị ga-ahọrọ, יה סתם, anyị ga-ele anya ebe a.
שניות Quad Core – 8
Njikọ Njikọ מיותר
שרת אינטרנט Lientpeed
Onye na-elekọta obodo na 24/7 na-akwado nkwado. אנכי אהבו ịnweta nkwado aka אתר na idobanye tiketi na ebe nrụọrụ weebụ, nkwado ntanetị ozi-e, ma ọ bụ site na itinye oku ekwentị. Dị ka m kwuru na mbụ, oge mmeghachi omume na-adị m ngwa ngwa. Nnyocha onwe onye na iche iche blọọgụ onwe onye yiri ka ọ dị mma.
Ndị ahịa na saịtị ahụ na-enye ih nlekọta banyere ihhe ha ji amasị Ogbe Ndịda. Ha na-enye ụbọchị 30 אחריות אגו חזרה.
אגו kachasị ịhụrụ
Pịgharịa gaa na "בית" peeji iji chọpụta onyinye ndị dị ugbu a (n’okpuru ‘Nkwalite Ugbu A’) iji nyere aka chekwaa obere ego.
Enweela m ebe nrụọrụ weebụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 15 afọ ugbu a، nke mbụ maka obi ụtọ m na emesịa ndị ọzọ dịka onye mmebe weebụ.
N’ime afọ iri na ọkara ahụ، agbalịrị m ọtụtụ ndị agha dị iche iche. Ana m eji ndị ọrụ atọ dị iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ m dị iche iche، n’ihi ụdị dị iche iche na ndị dị otú ahụ، ma Onye Ọchịchị Obodo Ukwu aghọwo m ngwa ngwa ụlọ ọrụ wea naa edebe ọtụtụ n’ime saịtị m na. E hiwere ha na 2001، ya mere ha anọwo na gburugburu 10 af.
1 Nsogbu Nsogbu وب
3 ịdị بوخوم
7 Ego kachasị ụhụrụ
Nsogbu Nsogbu وب
Ọ bụrụ na ị nọ na-emepụta ihe anntanetị ogologo oge karịa sekọnd atọ، a ga-abụrịrị na ị ga-enwe nsogbu na onye ọbịa ma ọ bụ abụọ. E nwere ihe ole na ole dị njọ karịa ịnweta saịtị gị na netwọk ọhụrụ ahụ، na-eche na ọ dị mma ma na-agba ọsọ na nsogbu ndị a na-apụghị idozi.
Nwelite nkwarụ – ị imelite ma ọ dịghị میش
Enweghị ụrụ ndị ahịa
bagba ụgwọ ụgwọ ọgwọ
سایت Nkwado teknụzụ n’aka onye nọ na mba ọzọ ma ị pụghị ịghọta ihe ọ na-ekwu n’ihi ụda olu
N’ime nsogbu ndị a nil، aghaghị m ịsị na ngwa ngwa ma ọ bụ dara ogbenye ahịa bụ kacha njọ. Enwere m ike ịzụta ihe efu ma ọ bụ abụọ، ma ọ bụrụ na m nwere ike ịrụ ọrụ na Ya. Enwere m ike ịnagide mmezigharị gwọ ụgwọ mgbe ụfọdụ. ụrụ ahịa ndị na-adịghị mma bụ otu n’ime ihe ndị siri ike ịmekọrịta، n’ihi na ọ na-eme ka ọ na-eme ka ọ Ghara ikwe omume idozi nsogbu ọ bụla i nwere. Ihe ọzọ nke na-akpata ọtụtụ nsogbu bụ oge na-adịghị ngwa ma ọ bụ ala Oge. Ndị ịbịa gị ga-enwe nkụda mmụọ maka ihe ndị a، ị ga-enwekwa ego.
N’oge gara aga، enwere m ụfọdụ akụkọ ọjọọ banyere saịtị na-agbada ma na-ewughachi (nke ga-akụziri gị ngwa ngwa ngwa iji na-edebe saịtị gị mgbe niile). N’elu nke ahụ، enwere m ndị ụsụụ ndị na-anwale kwụ ụgwọ site n’ịgba ụgwọ n’oge na-adịghị anya، na-agbanwe agbanwe ụgwọ oge، na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ maka ot . Mgbe ahụ، e nwere oge mgbe saịtị m nile gbadara n’enweghị ihe kpatara ya ma onye na-ọlekọta ya gbalịrị gwa m na ọ Ghaghị ịbụ na m ga-agwụ. Iche، ebe ọ bụ otu ihe ahụ na kọmpụta ọ bụla m gbalịrị na ndị niile m gwara ka m gbalịa wnweta saịtị m na njedebe ha. Ị nwere ike were ya na m dị ntakịrị ihe ụlọ ọrụ weebụ nakwa na ikwesị ntụkwasị obi na ọrụ ndị ahịa bụ abụọ n’ime àgwà ndị kacha emetụta m.
M gbanwere na Onye Ọchịchị Ebe Ọchịchị maka ọtụtụ n’ime akụkọ m na سپتامبر nke 2007.
Ugbu a، mụ na ha nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise، nke kachasị dịrị m ka mụ na ụlọ ọrụ ụ bụla nwere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo، ahụrụ m ihe dị iche na ọrụ ndị ahịa. Enweghị m ịjụ ma ọ bụrụ na ha na-enyefe ebe nrụọrụ weebụ m dị ka nzaghachi، ha nyere.
Oge ole na ole enwere m nsogbu، ha ​​azaghachiri ozi-e n’ime nkeji، ọ bụghị ụbọchị maọbụ awa. N’otu oge، ọ na-ewe ha ụbọchị ole na ole ka ha chọpụta ihe gbasara azụ، ma ha nọgidere na kọntaktị ma debe m na ọganihu. Ekwesịrị m ịsị na ndị ụrụ aka na-akwado ndị mmadụ na Ogbe Ndịda na-enwe nghọta na obi tọ.
Mgbe ndị omempụ wakpoo saịtị m، ha nyeere m aka ịmata otú m ga esi esi nwetaghachi ya ebe ọ bụ ma nye m ozi iji Chebe ya. Ihe ndị a bụ nsogbu ha na-enweghị iji nyere m aka، ebe ọ bụ na hack enweghị njikọ na ndị ụrụ ha، ma ha wepụtara oge iji nyere m aka n’ihi na ha nwere ihe ụmụma ma nwee ike.
Ọ dịghị ụlọ rụ nhazi nke zuru okè 100٪ nke oge ahụ. Ọ ga-amasị m ịnọgide na-enweghị mmasị na nyocha a ma kọọ nsogbu، ma enweghi m ọtụtụ. Anaghị m ejikọta ya na Onye Ọchịchị Obodo، ọzọ karịa ịchọta saịtị m na ha، ma akwụghị m ha iji dee nyocha a. M na-akọ nanị ahụmịhe m dịka otu n’ime ndị ahịa ha. Enwere mbelata oge na ebe a?
نعزی Ihe kpatara ọdịiche dị na Ogbe Ndịda Ọchịchị bụ na ha na-Azaghachi okwu ndị ahụ ngwa ngwa، achkachamara na afọ ojuju m. Nke ahụ bụ ihe na-egbochi m ịbanye na sava ha ruo ọtụtụ afọ na njedebe.
Onye na-elektronọta ndị ịbịa na-enye mkpokọta Bochum، nchịkọta nke Bochum na ndị nchịkwa نمایندگی فروش. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ndị ọzọ raara onwe ha nye، ha nwere ọtụtụ nhọrọ، dịka ndị sava raara onwe ha، raara onwe ha nye، ma ọ bụ sava nzuzo onwe.
O BU ezie NA ọnụahịa nwere آیک IDI iche، کارشناسی ارشد O bụrụ NA من کورو nchịkọta ISI ماکا OTU saịtị، من nwere آیک ịnweta 10 گیگابایت ohere NA 200 گیگابایت bandwit ماکا نانی $ 4.95 کوی Onwa به کارشناسی ارشد O bụrụ NA من debanye AHA ماکا atụmatụ kachasị ogologo ma kwụọ ụgwọ n’ọdịnihu. Ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ịchọọ ịmebanye ego dị otú ahụ ogologo Oge.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọtụtụ ngalaba، ị ga-achọkwu ohhere. Akwụkwọ هکتار "طلا به اشتراک گذاشته شده" na-enye 20 GB nke ohere diski na ikike ị gbakwunye na ngalaba na-akparaghị ókè maka gburugburu 25.95 $ kwa wanwa. Ị ga-echekwa ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka ọtụtụ ọnwa ruo afọ atọ n’ọdịnihu.
Njirimirim nke Onye Ogbe Ndịda na-enye dị mma maka ọtụtụ weebụsaịtị. Enwere ndụ ngosi nke ogwe ntụle ha na ebe nrụọrụ weebụ ha، n’ihi ya ị nwere ike inye ya ncha. Panyere a na-enye gị ohere ịnweta ihe niile sava ha ga-enye. Ọ na-agụnye Fantastico، nke na-enye gị ohere iji wụnye WordPress، PHPList na tụtụ ihe omme mmeghe ọzọ. Nke a ga-etinye usoro ihe omume ahụ ma meụpata data nchekwa SQL gị na-akpaghị aka، na-eme ka ọ bụrụ onye zuru oke maka onye nwe ụlọ rụ na-abụghị ụrụ. ایکه گونیر:
برنامه های افزودنی Frontpage
Na-akwado Mediaing Streaming
Nkọwa maka nkesa na-adịgasị iche، mana ịkekọrịta ngwugwu ọtụtụ ndị ga-ahọrọ، بله ، هرچند ga-elea anya ebe a.
Njikọ Njikọ کار برکنار شده است
وب سرور Lientpeed
Onye na-elektrọta obodo na 24/7 na-akwado nkwado. Enwere ike ịnweta nkwado aka site na idobanye tiketi na ebe nrụọrụ weebụ، nkwado ntanetị ozi-e، ma ọ bụ site na itinye oku ekwentị. Dị ka m kwuru na mbụ، oge mmeghachi omume na-adị m ngwa ngwa. Nnyocha onwe onye na iche iche iche blọọgụ onwe onye yiri ka ọ dị mma.
Ndị ahịa na saịtị ahụ na-enye ihe nlekọta banyere ihe mere ha ji amasị Ogbe Ndịda. Ha na-enye ụbọchị 30 Ego تضمین بازگشت.
Ego kachasị ụhụrụ
Pịgharịa gaa na "خانه" peeji iji chọpụta onyinye ndị dị ugbu a (n’okpuru ‘Nkwalite Ugbu A’) iji nyere aka chekwaa obere ego.